Filtrer les éléments par date : samedi, 30 novembre 2019
samedi, 30 novembre 2019 19:06
Andranomavo-Distrikan’i Soalala: Nisy ny famenoana bileta tokana mialoha, ny vata mangarahara
Nahazo tatitra ny CENI fa nisy ny famenoana mialoha ny vata mangarahara nataon’ireo mpikambana miisa 5 tao amin’ny birao fandatsaham-bato tao amin’ny Biraom-pifidianana iray ao amin’ny Fokontany Antsirabe, Kaominina Andranomavo, Distrikan’i Soalala. Tra-tehaky ny mpifidy io hosoka io. Karohin’ny Zandarimariam-pirenena ireo mpikambana miisa 5 nahavaonon-doza ireo amin’izao. Tsy afaka nanohy nanatontosa latsa-bato tao amin’io Biraom-pifidianana io.
Tao amin’ny Fokontany Taperipia, Kaominina Tsaraiko, Distrikan’i Betroka indray dia nisy ny fifandisoan’ny bileta tokana tamin’ireo tokony ho any amin’ny Kaomininina Beapombo II. Nisy ny fepetra noraisina nanolo izany tamin’ireo bileta tokana fiandry saingy tsy misy ny vaovao momba ny fizotry ny latsabato tany an-toerana, tsy mbola tonga eny amin’ny SRMV ny vokatra.
Ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no manapa-kevitra mikasika izay ho tohin’ny fifidianana tao amin’ireo Kaominina roa ireo.
samedi, 30 novembre 2019 19:05
Fifidianana kaominaly: Kaominina miisa 8 no tsy nisy fifidianana Mpanolotsaina
Kaominina 8 no tsy nisy lisitra mpanolotsaina nirotsaka hofidiana ary tsy nanatanterahana fifidianana Mpanolotsaina. Tsy maintsy hisy ny fifidianana amin’ny ampahany amin’ireny kaominina ireny, araka ny fanazavan’ny filoha lefitry ny CENI Rakotonarivo Thierry.
Ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no hanao ny fanamarinana ny fahitana fototra ny fahabangan-toeran’ireo mpanolotsaina ireo, ary 120 andro aorian’izay farafahatarany no tsy maintsy atao ny fifidianana amin’ny ampahany.
samedi, 30 novembre 2019 12:16
Fifidianana Kaominaly: Biraom-pifidianana 20, amin’ireo 25 388, no tena nahitana tsy fahatomombanana
Araka ny tatitra vojimaika nataon’ny CENI, dia Biraom-pifidianana 20 amin’ireo 25 388 manerana ny nosy, no tena nahitana tsy fahatomombanana, ary saika voavaha ara-potoana ny olana.
2 amin’ireo 25 388 ireo kosa no tsy nisy latsabato.
Nilaza ny CENI fa vitsy noho izay novisavisaina ny tsy fahatomombanana amin’ny ankapobeny.